USolwazi Towani Duchscher wase-University of Calgary ese-Canada ukhulume ngesihloko esithi: Tackling White Privilege: Moving from Non-Racist to Anti-Racist, wathi ukuze umuntu angabi nobandlululo ‘kudingeka uphumele obala” ngokuphikisana nokucwasana ngokwebala lokhu okudlange ezikhungweni zemfundo ephakeme. ‘Akugcini ngokuhlala wedwa ucabange ukuthi awunalo ubandlululo - kepha kusho ukuhliphiza ubandlululo lwabantu abamhlophe nokusebenzela ukwenza ukuthi izikhungo zingabi yindawo yobandlululo lobukoloni.’
U-Duchscher, onguthisha, uthe abafundi bavame ‘ukunikwa umhlaba oyinhlakanhlaka nonezikhundla’, wase egcizelela ubumqoka bokuthi izincwadi ezinikwa abafundi kufanele zibe nababhali abaMnyama nabalingiswa abaMnyama, wase ebuza umbuzo othi: “Kufundiswa umlando kabani”?
Isishoshovu nomcwaningi ozimele wase-Tri-continental Institute, uMnu Brian Kamanzi, ongakwazi ukuba khona kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe uthumele ividiyo yakhe ekwenza ucabange ethi: White Supermacy, Capitalism and Decolonisation.
UKamanzi uthe ukulwa nobukolini akuyona into ekwazi ukuchazwa yizifundiswa noma yinoma wubani enyuvesi. ‘Ukulwa nobukoloni wuhlelo lokulwa nezinto ezihambisana nabo ngezindlela eziningi obuzibonakalisa ngazo,’ kusho uKamanzi.
UKamanzi uthe mningi umcebo owebiwa eNingizimu Afrika “kusukela ezindaweni zezivini zamawayini eKapa kuye emigodini yasegoli nezimoba lapho okwakuyiNatali khona”.
UKamanzi ugcizelele ukubaluleka kokushintsha indlela esicabanga ngayo, wathi ukuthi abantu bagxile ekuzithembeni ezingeni lemiphakathini abakuyo. ‘Kudingeka senze abantu bathembane, babenombono wokwenza izindlela ezintsha njengoba uBiko nabalingani bakhe benza.
UMnuz Pule Monama, isishoshovu sobulungiswa bezenhlalo nenkakha nomakadebona we-Black Consciousness Movement, ukhulume ngesihloko esithi: Corruption as a Crime against Humanity: Time for Action beyond the Rhetoric.
UMonama uthe inkohlakalo ingubugebengu obungenabuntu nesenzo esingubugebengu. ‘Izingane zethu ziphoseka emigodini yezindlu ezincane, abasebenzi bethu bezempilo bayabhubha ngenxa yezinto zokusebenza zokuzivikela ezingekho ezingeni elifanele, izingane zethu zifunda ngaphansi kwezihlahla nasemnyamngo, iziguli zifela ezibhedlela nasemitholampilo ngenxa yokushoda kwezinto zokusebenza nemithi kanti imiphakathi yethu ayinamanzi ahlanzekile,’ kusho yena.
‘Inkohlakalo isiyisihlava emphakathini wakithi,’ kwengeza yena. Leli lungu elalikhona kusungulwa i-Azanian People’s Organisation (iAZAPO), ligcizelele ubumqoka bemfundo yomphakathi ekulweni nenkohlakalo.
Ummeli wamalungelo abantu ongummeli wasemajaji uMojankunyane Gumbi udingide isihloko Biko’s Quest for True Humanity: How far has the horizon shifted? U-Advocate Gumbi ugcizelele ukuthi ubandlululo isisekelo salo yizikhungo. ‘Ubandlululo lwenzelwa ukuncisha abantu abamnyama amathuba kwezomnotho’ kusho yena.
U-Advocate Gumbi, ongushansela wase-University of Venda, ugqugquzele ukuthi abantu bazabalaze noma yikuphi lapho bekhona. ‘Fundisa, fundisa, fundisa!’ kusho u-Advocate Gumbi. ‘Ungavumi ukugitshelwa ekhanda noma yikuphi lapho ukhona, ngena ugamanze bese uyafundisa.’
Umdidiyeli nowayeyilungu loMTAPO uDkt Sarifa Moola-Nernaes uhaye inkondlo eshubile ayibhala eminyakeni engama-20 edlule, esihloko sithi Corruption.
UMqondisi oMkhulu (obambile) ophikweni lezokuxhumana i-Corporate Relations Division, uNksz Normah Zondo, uthe le ngxoxo ifike ngesikhathi esihle njengoba amazwe amaningi, okubalwa iNingizimu Afrika kuwona, ‘abhekene nezinto ezithinta ubandlululo nenkohlakalo.’
Uthe “ukuba yisishoshovu kuBiko kwaqhakaza” ngenkathi engumfundi eSikoleni sobuDokotela eNyuvesi yaseNatali endala wase encoma “ngesibindi nobuholi bakhe kwi-Black Consciousness Movement. ‘Waba negalelo elikhulu ekugqugquzeleni abantu abacindezelwe ukuthi bakwazi ukungena ezifundweni zezibalo nezesayensi, abafundi abaMnyama ababencishwe ithuba kuzona,’ kusho uZondo.
Lesi Sifundo sibukwe eNingizimu Afrika, e-Bulgaria, e-Netherlands, e-United Kingdom, e-Canada, e-United States, e-Guyana, kwa-Izirayeli, e-France, e-Mexico nase-Norway.